Nokia 7.1 no nanokatra sarimihetsika maromaro tamin'ny vidiny malaza - Websetnet
Ny Nokia 7.1 dia nanokatra sarimihetsika maromaro tamin'ny vidiny marefo
Vidiny rehefa averina averina VAT 299inc
Nokia dia mamerina ny rindrina ao amin'ny Nokia 7.1, smartphone midadasika midadasika izay mikendry ny hametraka ny OnePlus 6
Ny fanavaozana lehibe nataon'i Nokia dia mety amin'ny herintaona ihany, fa ny telefaona tarihiny dia efa mahafaoka ny sarany rehetra. Avy amin'ny finday izay mitentina ny voanjo ho an'ny tebiteby Nokia 8 sirkaoko saina, ny orinasa dia mampiadana azy amin'ny toerana rehetra sy ny haben'ny sehatra smartphone.
Hetezina amin'ny ampahany farany amin'ny taona ary raha manomboka miditra ao anaty alina ny ririnina, dia hisy smartphone amin'ny Nokia hafa koa hiseho amin'ny fivarotana telefaona manerana ny tany. Fiarahabana Nokia 7.1, miarahaba ny fianakaviana smartphone Nokia izay tsy mitsaha-mitombo.
Nokia 7.1: vidin'ny UK, famoahana daty sy fepetra
Octa-core 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 636 processeur
3GB ny RAM
12-megapixel sy 5-megapixel cameras aoriana
32GB fitehirizana, azo ampiasaina amin'ny microSD
Daty famoahana UK: 17 Oktobra 2018
Nokia 7.1: Design, endri-javatra fototra ary fahatsapana voalohany
Nokia dia tena mijaly noho ny olan'ny fanambarana. Amin'ny alàlako, HMD Global - ny orinasa Soedoà misintaka ny solaitra Nokia - dia namoaka telefaona valo tamin'ity taona ity, tsy niresaka momba ireo olona tsy tambo isaina napetraka tao amin'ny 2017 nandritra ny fifohazan'ny Nokia taorian'ny fiatoana fohy.
Inona no tena manokana amin'ny antso an-tariby Nokia amin'ny alàlan'ny 2018? Eny ary, smartphone midadasika miara-midinika miaraka amin'ny sehatra napetraka ao amin'ny telefaona aficionado izay tsy manam-bintana ampy hananana iPhone Xs ny volany hividianana ny fanavaozana farany.
Tahaka ny fiaramanidin'ny Nokia smartphones, ny chassis 7.1 dia vita avy amin'ny singa aluminium tokana. Ny olon-drehetra dia tia tifitra tsara tarehy, ary ireo dia mazava ho azy fa ny sasany amin'ireo fepetra tsara indrindra ho hitanao amin'ny smartphone.
Tsy hoe tsara fotsiny izy io, fa: ny sisiny boribory dia miantoka fa mihodina eo an-tanana ny finday, ary ataovy mora ampiasaina ny mpamaky fingan-tsavily amin'ny alàlan'ny paikady, fa tsy manitsy ny hatezeranao na mametaka ny telefaona loatra eo amin'ny palmao.
Ny foibe sy ny foibe dia ny 5.84in, 2,244 x 1,080 IPS telefaona, miaraka amin'ny boribory kely ambany ary ambany ny fandrakofana ny sisin'ny efijery. Matokia fa tsara ery amin'ny fahatsapana voalohany izany; Mazava sy mazava izy io, izay tena tadiavinao amin'ny mpandefa mozika manintona.
Ny famenoana ny findainy dia ny finday midadasika ao amin'ny Snapdragon 636 midika hoe miompana amin'ny 1.8GHz ary miasa miaraka amin'ny 3GB an'ny RAM. Izany no fitambarana anatiny toy ny Moto Z3 Play ary Asus ZenFone 5 Noho izany, raha misy iray amin'ireo fitaovana ireo dia misy sombiny amin'ny hoe ahoana no hahatongavan'ny 7.1 hanombohana azy, tokony ho toy ny telefaona haingana tokoa izany.
Ny momba ny fahafaha-mamorona sary amin'ny 7.1, dia hahita fandaharana roa-kamera ianao ao ambadiky ny finday. Ny iray dia mahazatra fantsona 12 megapixel mahazatra, raha ny iray kosa dia ny 5-megapixel lantihy-tsipika, ho an'ireo lamaody fanehoana bokeh-effect portrait. Eo anoloana ny finday dia singa XYUMX-megapixel selfie snapper.
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Nokia 7.1 dia ny vidin'ny fanombohana azy. Tonga tao amin'ny fivarotana UK ho an'ny £ 299 amin'ny 17 Oktobra, nametraka tambajotra manan-danja ny fifanintsanana midadasika misy ny miditra an-tapitrisany ny telefaona farany indrindra amin'ny Nokia. Apetraho eo amin'ny endritsoratra ambony, ny endriny miramirana ary ny sarimihetsika tsara tarehy, ary toa mitovy amin'ny an'ny mpandresy isika rehefa manintona ny 2018.
Alao sary an-tsaina ny mijery ny Nokia 7.1.
Ny Smartphone voalohany voalohany an'ny Smartphone 10GB dia mety ho fampivoarana ny OPPO Find X
Huawei Mate 20's Kirin 980 no singa tsara indrindra - amin'izao fotoana izao: Ity ny antony
Telefona izany. Takelaka. Izy io no smartphone voalohany voalohany indrindra
Ny kaonty Google Hands Free App Free Google dia mamela anao hividy zavatra amin'ny tarehinao
Samsung Galaxy S6 miaraka amin'ny Google Android 6.0 Marshmallow Update
LG G6 vs Google Pixel XL: Inona no tsara indrindra amiko?
Ahoana ny fomba hamerimberenana an-tserasera indray ny finday mihantona amin'ny fiarovana tsy azo ovaina
SSH Facebook Apps loharano misokatra Video Linux Ubuntu Systems endri-javatra PPA GNOME Ubuntu 14.10 MAMAKA Time fitaovana Windows 10 "PC 10 MySQL Google CentOS 7 Unité centrale Samsung Galaxy Unix tahirin-kevitra SEO toe-tsaina paoma Microsoft Windows Company HTTPS fikarohana HTTP Linux Nginx Bing Rafitra fikirakirana vaovao farany Support taona YouTube SSD finday avo lenta fitaovana finday rindrambaiko ram Fitaovana finday nbsp famerenana app store Up " windows update bilaogy takelaka fikirakirana Debian Performance rafitra Cortana Phone fanamarinana raki-daza Malagasy Bible hametraka Command IP adiresy Plugin lalao haino aman-jery sosialy Apple Watch Server Windows Phone Samsung fifamoivoizana HTML web server WordPress PDG afa-po PHP ubuntu 15.04 Screen Chrome File Ubuntu 16 bilaogy One ' USB iPhone command line Ubuntu 14.04 Apache Ubuntu OS X Firefox Database fitaovana Linux Mint Windows 8 Android Plugins 04 Users 'App CentOS API web browser Windows Twitter fitaovana lalao famotsorana Toetoetra Microsoft